Indlu enevaranda - I-Airbnb
Ukubaleka ngempela-veki ekhetheke nyhani iyure nesiqingatha ukusuka eSydney CBD. Uza kuvakalelwa kukuba uxhalabile xa usiya kwindlela engcolileyo eya kwindawo yakho entle ehlathini. Indlu enevaranda ibekwe kwiindawo ezintle ezijikeleze ulwandle. Xa usandul 'ukulungiswa ngefenitshala entsha nezinto zebhedi, uza kuba nazo zonke izinto ezenza uzive usekhaya, uze wonwabele izandi zendalo kwindawo yakho yabucala okanye uthe zava ebhedini yakho ekwiloft. Isibini esifanelekileyo sokuphumla.
Indlu enevaranda ineendawo ezintle zombini - ihlathi kunye nolwandle. Xa kungekho bamelwane babonakalayo ngaphandle kwendlu enkulu, uza kuba ngathi ukude ngeemayile ezimbalwa. Hlala esofeni ephandle kwindawo yakho yabucala uze wonwabele ukubuka ulwandle okanye ubukele ukuphuma kwelanga uthe zava kwibhedi yakho eseluphahleni ejongene nolwandle. Indlu enevaranda inento eyahlukileyo kwizindlu ezininzi ezikule ndawo. Unxweme neekhefi zikumgama wemizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 ukusuka endlwini yethu. Indlu enevaranda inesitovu esiphezulu sokupheka, kodwa ayinayo ioveni. Ngoko ukuba ungumpheki onomdla, mhlawumbi asiyiyo indawo yakho. Kungenjalo gcina izinto zilula. IColedale ineevenkile zokutyela ezinamaxabiso okuqala onokutya okumnandi okulungele zonke izinto ezifunekayo. Zama i-Earth Walker okanye ezinye iikhefi, iibhari kunye neevenkile zokutyela ukusuka eColedale ukuya eThirroul kuquka iHeadlands Hotel, iCin & South Sailor ukuzitsho ezimbalwa. Kukho amalwandle angapheliyo, iipuli zaselwandle kunye neendawo zokusefa onokukhetha kuzo okanye uchithe impela-veki ubuka ubuhle be-escarpment kunye neendlela ezininzi zokuhamba ezilungele onke amanqanaba okuzilolonga. Zama iklasi ye-yoga okanye uphumle nje kwiveranda. Soze udanise.
Ubomi bucotha kancinci eColedale. Zulazula kwenye yeekhefi zethu zasekuhlaleni ukuze ufumane isidlo sakusasa eside. Buka i-headland walk ukuya kwi-SeaCliff Bridge okanye uchithe imini elunxwemeni. Kukho iilwandle ezininzi kakhulu onokukhetha kuzo ungakhankanyi ipuli entle yolwandle eColedale okanye ezinye ezininzi ezifafazwe ngaselunxwemeni ukusuka kumantla ukuya kumzantsi.
Ndisoloko ndifumaneka ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo okanye ndikunike amacebiso asekuhlaleni ngoko nceda uzive ukhululekile ukubuza ukuba unemibuzo. Ukuba ndikufutshane ndiza kukubulisa xa ufika kungenjalo siza kukushiya unoxolo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho.
Ndisoloko ndifumaneka ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo okanye ndikunike amacebiso asekuhlaleni ngoko nceda uzive ukhululekile ukubuza ukuba unemibuzo. Ukuba ndikufutshane ndiza…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-1266